ဂဠုန် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Myanmar Democrazy
ဂဠုန်နီ (တစ်) + (နှစ်) »
လေးသောဝန်ကို ဆောင်ယူတတ်သော သတ္တ၀ါသည် ဂဠုန်မည်၏ ဟု မာဂဓအဘိဓာန်များက အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြသည်။ထို့အပြင် ဂဠုန်သည် ငှက်တို့၏မင်းဖြစ်သည်။နဂါးတို့ကို နိုမ်နင်းသတ်ဖြတ်နိုင်သည်ဟု ကျမ်းဂန်တို့၌ ဆိုသည်။
ယင်း၏အတောင်များမှာ ရွှေအဆင်းကဲ့သို့တောက်ပြောင်လှပသည်ဟု အဌကထာကျမ်းများ၌ ဆိုသည်။ ဂဠုန်ငှက်မင်းသည်ယူဇနာ ၁၅၀ ခန့် အရွယ်ရှိကြောင်း သုတ်မဟာဝါ အဌကထာ မဟာနိဒါနသုတ်၌ ပါရှိသည်။ဂဠုန်မင်းသည် ဂဠုန်လေကိုပြုအံ့သောငှာ အားထုတ်လတ်သော် ယူဇနာ ၆၀၀ ရှိသော အရပ်သည် မလောက်ဟူ၍ သံယုတ် အဌကထာ၌ လာရှိလေသည်။
ဗေဒင်ကျမ်းဂန်များ၌ တနင်္ဂနွေဂဠုန် ရှေ့မြောက်ကြုံ နေတုံခြောက်နှစ်မျှ ဟူသောသံပေါက်အရ တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်၏ အမှတ်အသားမှာ ဂဠုန်ဖြစ်သည်။ရဲရင့်ခြင်း ၊အားခွန်ဗလကြီးခြင်း၊ အောင်မြင်ခြင်းတို့ကို ဆောင်သည်။ခရစ် ၁၉၃၀ ပြည်နှစ်၌ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဗြိတိသျှအစိုးရအား ပုန်ကန်တော်လှန်သော ဆရာစံသူပုန်ကြီး ပေါ်ပေါက်ခဲ့ဖူးသည်။ စနေနံ (နဂါးရုပ်) ဖြစ်သော အင်္ဂလိပ်ကို အောင်နိုင်စေခြင်းငှာ ဆရာစံသည် သုပဏ္ဏက ဂဠုနရာဇာ (ဂဠုန်မင်း) ဘွဲ့ကိုခံယူခဲ့သည်။
မြန်မာစာပေတို့တွင် ဂဠုန်အကြောင်းကို ဤသို့တွေ့ရသည်။
ဂဠုန်နဂါး ပုံမခြား စုံများတဲ့ရုပ်ကောင်
လွမ်းချင်သည့်စိတ်က ၀ိပ္ပလ္လာ ဟူ၍ စိန်ခြယ်ဖြာရောင်လင်း ကြိုးသီချင်းတွင်တိမ်ကို တင်စားနှိုင်းဖွဲ့ခဲ့သည်။
မြန်မာစာပေလောကတွင် စာဆိုအကျော်အမော်တစ်ပါးဖြစ်သော ရှင်ဥတ္တမကျော်၏ တောလားရတုတွင်လည်း
တိမ်ညိုမိလ္လာ တိမ်စူကာနှင့် ၊
တိမ်ပြာရောယှက် မရမ်းဖက်၍ ၊
မှောင်ခဲ့တခါ ၊ ပြာခဲ့တစ်မျိုး ၊
ညိုခဲ့တစ်လီ ၊ ရီခဲ့တဖုံ ၊ မှုန်ခဲ့တချက် ၊
ယုဂန်ထက်က လေးဖက်လုံးခြုံ ၊
ခိုးငွေ့လွှတ်ပြိုင် ၊ ရန်ခြင်းဆိုင်ခဲ့ ဟူ၍တိမ်ကိုပင် သက်ဝင်လှုပ်ရှား ဂဠုန်ငှက်အလား တင်စားနှုန်းဖွဲ့ခဲ့သည်။
မြန်မာတို့ ဝေါဟာရ အသုံးအနှုန်းတွင် စစ်ဆင် စစ်တက်ရာ၌ ဂဠုန်တောင်ပံ ဖြန့်သည် ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်
ဖြစ်သည်ကို နဂါး ဂဠုန်လိုက်သည် ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ဆေးပင်ဝါးပင်များတွင် ဂဠုန်လက်သည်းပင် ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ဂဠုန်ဆိုသောငှက်ကို အထူးတင်စား၍ ဆိုလေ့ရှိကြသည်။ ပသီပုံပြင်များတွင်လည်း ဂဠုန်ကဲ့သို့ကြီးမားသောငှက်များ ရှိကြောင်း ဖော်ပြပါရှိလေသည်။
ဘုရားဟော မုက္ခပါဌ် ငါးရာ့ငါးဆယ် ဖြစ်စဉ် တိံသ နိပါတ် ပဏ္ဍရကဇာတ်တော်၌ကား ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်သည် ဂဠုန်မင်း ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်ဟု တွေ့ရလေသည်။
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ ( ၃ ) အပိုင်း ( က )
Indonesia Garuda (wikipedia)
This entry was posted on February 22, 2014 at 6:43 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.